मस्कोमा मेट्रो स्टेशन VDNH नजिक होटलहरू
स्थान होटल ग्लोबस
होटल ग्लोबसमा खाना
होटल सेवा ग्लोबस
साइट प्रयोग गरेर, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि हामी कुकी, यन्डेक्स. मिटेट्रिक र गुगल.nagltics लाई प्राविधिक डेटा र साइट निजीकरण स collect ्कलन गर्न प्रयोग गर्दछौं।
आराम गर्नुहोस् जब तपाईं कोठाको उपयुक्त वर्ग छनौट गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। कुनै पनि नम्बर पुस्तक द्वारा, तपाईं अहिले गर्न सक्नुहुनेछ। <
उही नामका साथ रेस्टुरेन्ट भ्रमण गर्नुहोस् र वैकल्पिक वा वार्षिकोत्सव मनाउनुहोस्, संगठित गर्नको लागि। बन्द पार्टी कुनै पनि हिसाबले महँगो छैन, तर चम्किलो साथ। हाम्रा विशेषज्ञहरूले ठूलो परिदृश्यलाई तयार पार्नेछन् र उच्च श्रेणीमा सबै चीज पूर्ण हुनेछन्। <
आधुनिक टेक्नोलोजीको साथ सुसज्जित।
समूह आदेशमा छुट छ वा दीर्घकालीन आवासको मामलामा।
होटल ग्लाइट ग्लेटल ग्लोबले सबै-रूसी प्रदर्शनी केन्द्र (WVC) को क्षेत्रमा पक्राउ गरेको प्रदर्शनहरूमा निरन्तर आनन्द लिन्छन्। यी मध्ये एक होटल ग्लोब समावेश छ। अर्को होटल जटिलताहरू विपरीत, होटल ग्लोस अपार्टमेन्ट आवास होटल हो, दीर्घकालीन आवासको लागि आदर्श। जनावर आवास होटलमा समायोजन गर्न सकिन्छ, जुन जो पर्यटकहरूको लागि धेरै सुविधाजनक हुन्छ जो Zo-ह्यान्डलिंग आउँदछन्।
होटल ग्लोब मस्को मस्कोले अपार्टमेन्ट प्रकारका 500 आरामदायक र प्रशस्त अपार्टमेन्ट प्रदान गर्दछ:
होटलको पन्जाको पोषण अन्तर्निहित चित्रहरू, मूर्तिकला, स्टेट्यूट, जीवित बाविक उत्पादन र फूल रचना संग संतृप्त छ, सान्त्वना सिर्जना गरेर र एक सकारात्मक भावनात्मक प्रभाव प्रदान गर्दै।
हाम्रा ग्राहकहरूको निपटानमा एक भव्य बार र एक परिष्कृत रेस्टुरेन्ट। रेस्टुरेन्ट शो कार्यक्रममा प्रत्येक साँझ। हामी प्राय: रूसी पपको ताराहरू द्वारा भ्रमण गर्दछौं। मस्कोको सब भन्दा राम्रो बारटेन्डरहरू सँधै तपाईंको लागि परिष्कृत ककटेल तयार गर्दछ। बार र रेस्टुरेन्टको घडीको वरिपरि काम। रेस्टुरेन्ट एकै समयमा 500 व्यक्तिमा लिन तयार छ, त्यसैले यदि तपाईं पार्टीको व्यवस्था गर्न चाहानुहुन्छ - खुशी, खुशी। होटलका ग्राहकहरूले कोठा सेवा बनाउँदछन्।
विश्वास छ कि परम्पराको वफादारीले वर्तमानको प्रवृत्तिलाई संकेत गर्दैन? आधिकारिक साइट मस्कोको सुनौलो कोलोलो होटलमा उपलब्ध छ। यहाँ सम्मिलित आधुनिक प्रविधिले फोनबाट मात्र नभई फोनबाट मात्र अनुमति दिन्छ, अनलाइन पनि, सिधा साइटमा। र विस्तृत यात्रा योजनाहरू र फोटो ग्यालरी, विभिन्न वर्गहरूको संख्यामा समाप्त र वातावरणको मूल्यांकन गर्न अनुमति दिँदै, तपाईंलाई प्रस्तावित सेवा स्तरका सबै पक्षहरूमा सजिलै नेभिगेट गर्न अनुमति दिनुहोस्।